विश्व Archives - Sudur Khabar
महाकाली नदीमा आधा दर्जन पुल बन्छन्ः भारतीय राजदूत राय अझै राहत पाएनन् दौड तोलेनीका बाढीपीडितले २५ क्षमताको कारागारमा ४८ जना कैदी ! ममताको उपचारका लागि १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ सहयोग राष्ट्रपतिको छोरीको हातमा सुनैको बाला ! हिराजडित औँठी, घाँटीदेखि सिउँदोसम्म गहनैगहना ! विश्व
ट्रम्पको लगातार विरोध गरिरहेका ओबामाले अचानक भने, ‘ट्रम्पलाई कम नसम्झनुहोस्’
अमेरिकाका ४५ राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित डोनल्ड ट्रम्पलाई धेरै मानिसहरुले रुचाएका छैनन् भन्ने कुरा हामीसँग लुक्न सकेको छैन । उनको विरोध गर्नेमा राष्ट्रपति बराक ओबामा पनि एक हुन् । तर स्थिती अहिले परिवर्तन भइसकेको छ किनभने ओबामाले अब ट्रम्पलाई समर्थन गरिरहेको बुझ्न आएको छ ।
संगीत समारोहमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार : पाँच जनाको मृत्यु
काठमाडौं, माघ ४ । मेक्सिकोको भइरहेको संगीत समारोहमा एक जना बन्दुकधारीले आक्रमण गर्दा पाँच जना मारिएका छन् ।
मेक्सिकोको किटाना राज्यको प्लाया देलमा संगीत समारोह भइरहँदा अज्ञात बन्दुकधारीले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरेको बताइएको छ । आक्रमणमा मारिनेमा दुई क्यानेडियन, एक इटली र एक जना कोलोम्बियन नागरिक......
काठमाडौं, माघ ४ । चन्द्रमामा पाइला टेक्ने अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री गेने सरननको ८२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । केही समयदेखि अस्वस्थ रहँदै आएका उनको मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतलाई उदृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
सरनन चन्द्रमामा अन्तिम मानव पाइला राख्ने अन्तिम अन्तरिक्ष......
५ सयभन्दा बढी बालिका बलात्कार गर्ने अभियुक्त पक्राउ
काठमाण्डौँ, माघ ४ । भारतमा बलात्कार डरलाग्दो सामाजिक अपराधका रुपमा बढ्दै गएको छ । प्रहरीले हालै शृंखलावद्ध बलात्कारमा संलग्न एकजनालाई पक्राउ गरेको छ, जसले ५ सयभन्दा बढी बालिकालाई बलात्कार गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार ३८ वर्षीय सुनिल रस्तोगीले १२ वर्ष यता ५ सय भन्दा बढी बालिकालाई......
अमेरिकी कम्पनीले गान्धीको तस्बिर भएको चप्पल बनाएपछि भारत रुष्ट
काठमाण्डौँ, माघ ३ । भारतीय स्वतन्त्रताका प्रतीक महात्मा गान्धीको तस्बिर भएको चप्पल अनलाइन सप अमेजनमा सार्वजनिक भएपछि भारत रुष्ट भएको छ । भारतको राष्ट्रिय झण्डा भएको डोरम्याट बेच्न बन्द गनुपर्ने आवाज उठेको केही दिनमै गान्धीको तस्बिर भएको चप्पल पनि सार्वजनिक भएको हो ।
गएको बुधबार आफ्नो राष्ट्रिय......
ट्रम्पको शपथग्रहण अभ्यासको तयारी, ओबामाजस्तै देखिने को हुन् यी युवक ?
वासिंगटन, माघ ३ । आगामी २० जनवरीका दिन सम्पन्न हुन गइरहेको अमेरिकाको ४५औं राष्ट्रपति पदको औपचारिक शपथग्रहण दिवस आउन अब चार दिनमात्र बाँकी छ ।
यसैदिन निवर्तमान र नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिबीच शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण र बरबुझारथ गरिने कार्यक्रमको आयोजना पनि भएको छ ।
निर्धारित् समय तलमाथि हुन नपाओस्......
टर्कीस एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना : २० जनाको मृत्यु
काठमाण्डौ, माघ ३ । टर्कीस एयरलान्सको विमान किर्गिजस्तानमा दुर्घटना भएको छ । सोमबार मनास विमानस्थल नजिकै भएको सो दुर्घटनामा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।
बोइङ्ग ७४७ कार्गो विमान हङकङबाट इस्टानबुल गइरहेको थियो । कमजोर दृष्यशक्तिका कारण अवतरणको क्रममा रहेको विमान दुर्घटना भएको बताइएको छ......
गुप्तचर निकायका प्रमुखले डोनाल्ड ट्रम्पलाई दिए चेतावनी
काठमाण्डौ, माघ ३ । अमेरिकी गुप्तचर निकाय ‘सीआइए’का प्रमुख जोन ब्रेननले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पलाई आफ्नो बोलीमा नियन्त्रण गर्न चेतावनी दिएका छन् ।
सिआइएका प्रमुख ब्रेननले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि ट्रम्पले बोलेका विषयले निकै महत्व राख्ने भन्दै हल्फाफुल्का टिप्पणीलाई......
यसरी भेट्ने तयारी गर्दैछन् ट्रम्पले पुटिनलाई
लण्डन (बेलायत), २ माघ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचति डोनाल्ड ट्रम्पले रसियाली राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग आपूm अमेरिकी राष्ट्रपतिका रुपमा का शुभारम्भ गरेपछि आइसल्याण्ड शिखर सम्मेलनको आयोजना गरी भेटवार्ता गर्ने सेन्डे टाइम्समा जनाइएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी लिएलगत्तै केही......
ब्राजिलको जेलमा फेरि झडप, १० जना मारिए
काठमाडौं, माघ २ । ब्राजिलमा फेरि जेलका कैदीबीच झडप भएको छ । यसक्रममा कम्तिमा १० जना मारिएका छन् ।
ब्राजिलको उत्तरपूर्वी शहर नाटालमा रहेको त्यस क्षेत्रकै ठूलो एलकाकुज जेलमा कैदी बन्दीबीच झडप भएको हो । जेलमा रहेका कैदीका दुई समूहबीच झडप भएको प्रहरीले जनाएको छ । यो वर्ष मात्र ब्राजिलमा तेस्रो पटक झडप......